Maamulka galmudug oo war kulul ka soo saaray dhibaatooyinka ka dhashay isticmaalka lacagaha shilin soomaliga ah – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 20th July 2017 067
Mas’uuliyiinta sare ee dowlada goboleedka Galmudug ayaa war ka soo saaray dhibaatooyinka ka taagan lacagaha shillin Soomaaliga ah, abaaraha iyo dagaalo ka soo cusboonaaday deegaanadaasi waxayna sheegeen in loo baahan yahay in laga wada qeyb qaato sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi.
Shirjaraa’id uu ku qabtay magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee Galmudug madaxweyne kuxigeenka maamulkaasi ayaa waxaa uu kaga hadlay dhibaatooyinka ka dhashey isticmaalka lacagaha shillin Soomaaliga ah oo deegaanada Galmudug laga diiday iyo sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Hadalkani ka soo baxay maamulka Galmudug ayaa imaanaya ayadoo muddooyinkii ugu dambeyeey deeganaad Galmudug ay ka taagnaayeen xaalado adag kadib markii ganacsatadu ay diideen in ay qaatana lacagaha shillin Soomaaliga ah.
Daawo: Maxaa ka soo baxay kulan muhiim ah oo dhexmaray ra’isul wasaare kheyre iyo qaar kamid ah urrurada….
Daawo: Sidee muqdisho loogu soo dhaweeyay haweeneydii ugu horeysay ee duuliye ka noqotay soomalia sanadkii 1976-dii?
R/Wasaare Sharma'arke oo Gaalkacyo Kulla Kulmaayo Madaxweynaha Gal-mudug
Daawo: Ciidamada puntland oo boosaaso ku qabtay nin mudo 25 sano dadka sixraayay oo mudo lagu raad joogay